Jabra manavao ny elanelam-bokiny miaraka amina lohan-dahatsoratra Elite Series | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 31/08/2021 17:26 | General, About us
Jabra dia manolo-tena amin'ny haitao sy ny kalitaon'ny feo, efa nandinika ny maro amin'ireo fitaovan'izy ireo eto amin'ny Actualidad Gadget izahay ary tsy mitsahatra ny manaitra anay fa nanararaotra tamin'ity taona 2021 ity izy ireo hanangana andiana vokatra manintona hanohizana hitandrina ny avo ambaratonga miaraka amin'ny feo tsy misy tariby. Jabra dia manolotra ny Elite 3, Elite 7 Pro ary Elite Active, ny headphones vaovao ho an'ny mpijery rehetra.
3 Daty famoahana sy vidiny
I Jabra dia miditra amin'ny vokatra avo lenta miaraka amin'ny Elite 3, fitaovana iray manolotra mpandahateny 6-milimetatra, ekipa fampitahana, codec ary Qualcomm aptX HD teknolojia ary hatramin'ny fito ora ny fahaleovan-tena izay hitarina hatramin'ny 28 ora, noho ilay boaty fiampangana tafiditra. Mazava ho azy fa tsy manana fanafoanana ny tabataba mavitrika izahay, fa manamafy kosa izahay fa noho ny fihenan'ny HearThrough, afaka miditra amin'ny feon'ny manodidina azy ireo mpampiasa. Ny faritry ny loko dia hahitana manga manga, volondavenona mainty, lilac ary beige mazava.
Ireo kapila finday avo lenta farany avy any Jabra ireto dia hanasongadinana ny teknolojia MultiSensor Voice, Jabra mba hanomezana feo kalitao matihanina. Mazava ho azy fa miaraka amina teknolojia fanafoanana ny tabataba izay mampiavaka ny orinasa io.
Amin'ny ambaratonga mizaka tena, dia hankafy ny filalaovana mitohy maharitra 9 ora amin'ny alàlan'ny ANC izay hiakatra hatramin'ny 35 ora isika raha miresaka momba ilay boaty fiampangana, izay manana fanoherana rano IP57 manontolo. Mba hanararaotana ny teknolojia aptX HD dia mampiasa Bluetooth 5.2 izy io ary mazava ho azy fa miloka amin'ny mety hisian'ny fampiasana tsy miankina izy ireo (tsy misy handset andevo), ary koa ny rafitra fifandraisana miaraka amin'ny fitaovana marobe.
Amin'ny lafiny iray, miaraka amin'ny Android, ireo mpanampy virtoaly lehibe toy ny Google Home sy Alexa dia hitantana rafitra fampidirana, ary miaraka amin'ny iOS dia hiasa bebe kokoa amin'ny alàlan'ny Siri.
The Jabra Elite 7 mihetsika miaraka amin'ny pataloha ShakeGrip TM mpisava lalana, tonga lafatra ho an'ireo mpampiasa manana fomba fiaina mavitrika.
Daty famoahana sy vidiny
Ny Elite 3 dia ho hita amin'ny 1 septambra, raha ny Elite 7 Pro sy Elite Active kosa dia ho hita amin'ny 1 Oktobra. Ny vokatra rehetra dia ho hita ao amin'ny magazay voafantina amin'ny vidiny naroson'ny:
Elite 7 Pro: € 199,99
Elite 7 Active: € 179,99
Elite 3: € 79,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Jabra dia manavao ny elanelam-bokiny miaraka amina seho andiany Elite telo
Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, famakafakana miaraka amin'ny vidiny sy ny fiasa